प्रदेश २ मा सक्रिय हुन एमालेको निर्देशन- समाचार - कान्तिपुर समाचार
प्रदेश २ मा सक्रिय हुन एमालेको निर्देशन
काठमाडौं — प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले प्रदेश २ को चुनावका लागि सक्रिय हुन पार्टीका सबै कमिटीलाई निर्देशन दिएको छ । एक चरणको स्थलगत चुनावी कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको एमालेले निर्वाचन मिति नजिकिँदै जाँदा पुन: विशेष अभियान अघि बढाउन निर्देश गरेको हो ।
स्थायी कमिटीको बुधबारको बैठकले पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति प्रदेश २ मा केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले त्यसका लागि प्रदेश केन्द्रित गतिविधि बढाउन मातहत सबै संगठनलाई आग्रह गरेको छ । एमालेले प्रदेश २ को चुनावका लागि केन्द्रबाटै जिल्ला–जिल्लाको कमान्ड गर्ने गरी पदाधिकारी तहका नेतालाई जिम्मेवारी दिइसकेको छ । जिम्मेवारी पाएका सबै नेताले पहिलो चरणको अभियान सकेर केन्द्रलाई प्रारम्भिक रिपोर्ट बुझाइसकेका छन् ।
बैठकमा आगामी मंसिर १० मा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावबारे पनि समीक्षा गर्दै त्यसका लागि पनि पार्टीपंक्तिलाई सक्रिय बनाउने निर्णय भएको सचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आउँदो शुक्रबार निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गर्न उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई जिम्मेवारी दिइएको उनले बताए ।
प्रकाशित : भाद्र ८, २०७४ ०७:२६
भारतको सुरक्षा चासोमा काठमाडौंले ध्यान नदिएको गुनासो
माइक्रो म्यानेजको आरोप आंशिक सत्य : पूर्वराजदूत राजन
-नेपालका राजनीतिक दलमा चीनको प्रभाव बढ्दो : मेहता
नयाँदिल्ली — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतको पाँचदिने राजकीय भ्रमण सुरु गरेकै दिन भारतका पूर्वकूटनीतिज्ञ तथा विश्लेषकहरूले भारतको वास्तविक सुरक्षा चासोलाई काठमाडौंले पर्याप्त ध्यान नदिएको बताएका छन् ।
भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा आयोजना गरिएको ‘दुई देशका जनता–जनताबीचको सम्बन्ध’ विषयक अन्तक्र्रियाका सहभागी कूटनीतिज्ञ तथा विश्लेषकहरूले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई चीनसँगको सम्बन्धसँग तुलना गर्नै नमिल्ने बताए । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय पक्षले आफ्नो सुरक्षा चासोलाई अझ मुखरित रूपमा राख्ने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा भारतीय विश्लेषकहरूले समेत यही कुरामा जोड दिए ।
‘भारतको वास्तविक चासोलाई काठमाडौंले त्यति चासो नदिएजस्तो देखिन्छ,’ भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदूत केभी राजनले भने, ‘भारतको सुरक्षा चासोलाई नेपालले सम्बोधन गर्नुपर्दछ ।’ उनले नेपाल र भारतको सम्बन्ध अरू कुनै मुलुकसँग तुलना हुन नसक्ने बताए । ‘नेपाल र भारतको सम्बन्ध अहिले जुन तहको छ, चीन र नेपालको सम्बन्ध कहिल्यै त्यो तहमा पुग्न सक्दैन । यसलाई काठमाडौंले स्वीकार गर्नुपर्दछ,’ उनले काठमाडौंमा देखिएको उग्र राष्ट्रवादले नेपाल र भारत दुवैको हित नगर्ने भन्दै त्यसले नेपालमा भारतविरोधी भावना बढाएको दाबीसमेत गरे । भारतले नेपालको मामिलामा माइक्रोम्यानेज गरिरहेको भन्ने आरोप आंशिक सत्य रहेको राजनको धारणा थियो ।
‘केही विज्ञहरू भन्ने गर्दछन् कि नेपालका नेताहरू भारतमा सुझाव लिन आउँछन् र भारतले सुझाव दिन्छ तर काठमाडौं फर्केपछि उनीहरू त्यसलाई हस्तक्षेप मान्दछन् । भारतले भनेजस्तो नेपालमा हुँदैन भन्ने तत्कालकै नेपालको केही राजनीतिक घटनाक्रमले देखाउँछ,’ राजनले भने । उनले नेपाल–भारत
सम्बन्ध सुधार गर्न संस्थागत तथा नीतिगत कदम सुधार्नुपर्ने औंल्याए । नेपाल मामिलाका जानकार अशोक मेहताले पछिल्लो समयमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा चाइना फ्याक्टर जबर्जस्त रूपमा आउन थालेको बताए । उनले नेपालका राजनीतिक दलहरूमा चीनले आफ्नो प्रभाव बढाउँदै लगेको समेत बताए । नेपालका परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले दोक्लम तनावमा नेपाल ‘तटस्थ’ बस्छ भनेको प्रसंग उल्लेख गर्दै मेहताले भने, ‘महराको अभिव्यक्ति पृथ्वीनारायण शाहको विदेश नीतिसँग मिल्छ । तर भारत र चीनबीच युद्ध भयो भने नेपालले के गर्छ ? किनकि भारतीय सेनामा ५० हजार गोर्खा सैनिक छन् ।
त्यतिबेला नेपाल तटस्थ बस्छ कि गोर्खा सैनिकको पक्षमा बोल्छ ? त्यसैले नेपाल यतिबेला धेरै ट्रिकी पोजिसनमा छ ।’ मेहताले नेपाली नेताहरू भारत आएर विशेष सम्बन्धको कुरा गर्ने तर काठमाडौं फर्केपछि त्यसलाई बिर्सने गरेको आरोप लगाए । जनता–जनताबीचको सम्बन्ध सुदृढ गर्न भारतले आफ्ना मुलुकमा रहेका नेपालीलाई सम्मान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल मामिलालाई निरन्तर फलोअप गर्ने भारतीय नेता विजयप्रताप सिंहले नेपालबारे भारतको उच्च राजनीतिक तहमा कम जानकारी रहेको बताए ।
नेपाल–भारत मामिलाका जानकार उद्धव प्याकुरेलले भारतले दुई वर्षअघि लगाएको नाकाबन्दीका कारण भारतविरोधी भावना बढेको स्विकारे । उनले भने, ‘जनता र जनताबीचको सम्बन्ध राम्रो होइन, बिग्रँदो अवस्थामा छ । पहिला भारतमा पहाड र मधेसका नागरिकलाई हेर्ने दृष्टिकोण समान थियो । मधेस आन्दोलनपछि दिल्लीमा मधेसका नागरिक र पहाडका नागरिकलाई फरक रूपमा हेरिन्छ,’ प्याकुरलेले भने । उनले सन् १९५० को सन्धिअनुसार नेपालले मात्र भारतीय श्रमबजारको फाइदा लिएको कुरा सही नभएको बताए । उनले भने, ‘विहार र उत्तरप्रदेशका धेरै भारतीय नागरिक नेपालमा काम गर्छन् ।’